पुरुषहरूले गुगलमा के–के खोज्छन् ? पत्ता लाग्यो अनौठो तथ्य – अभियान पोष्ट
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको यो युगमा मानिसहरुका लागि गुगल दैनिकी जस्तै बनेको छ । स साना जानकारीहरुका लागि समेत हामीहरु गुगलमा निर्भर भएका छौं । कसैले केही कुरा सोध्यो भने त्यसको जवाफ दिनुअघि हामी गुगलमा सर्च गर्न थाल्दछौं ।
कपाल कसरी झर्दछ ? : पुरुषहरुले गुगल सर्चमा अत्यधिक खोजी गर्ने केही विषयहरु निकै रोचक पनि छन् । पुरुषहरु जान्न चाहन्छन् कि के चुल्ठी बाट्नाले वा टोपी लगाउनाले कपाल झर्न सक्दछ रु कपालको चिन्ता गरेर गुगलको सहारा लिनेहरु ५२ हजार २ सय जना थिए ।
व्यायाम र प्रोटिन : कतिपय पुरुषहरु आफ्नो फिटनेसलाई लिएर निकै चिन्तित हुन्छन् । उनीहरु व्यायाम गरे लगत्तै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन् । यदि प्रोटिन खानुपर्दछ भने कस्तो प्रोटिन खाने ? भन्ने कुरा पनि उनीहरुले गुगलमा सर्च गरिरहेका हुन्छन् । अध्ययनका क्रममा ५१ हजार जना पुरुषले उल्लेखित सवालको जवाफ गुगलमा खोज्ने प्रयत्न गरेका छन् । –एजेन्सी